"सात सालको क्रान्ति" का संशोधनहरू बिचको अन्तर - विकिपिडिया
"सात सालको क्रान्ति" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
सात सालको क्रान्ति (सम्पादन गर्ने)
२०:२६, १२ डिसेम्बर २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन
८६ bytes added , १० महिना पहिले
०८:४८, २७ अगस्ट २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
सा (बोट: स्वचालित पाठ परिवर्तन (-बर्ष +वर्ष))
२०:२६, १२ डिसेम्बर २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सा (→‎क्रान्तिको स्वरूप)
नेपाली काङ्ग्रेसको असोज ११—१२, २००७ सालमा बैरगनियामा भएको सम्मेलनले राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो । २१ कार्तिक २००७ मा क्रान्तिको घोषणा भयो । यसै समयमा राजा त्रिभुवनले पनि यस क्रान्तिलाई सहयोग गर्ने गरी कार्तिक २३ गते सपरिवार भारतीय विमानद्वारा दिल्ली प्रस्थान गरे । तात्कालीन राणा प्रधानमन्त्री [[मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा|मोहन शमशेर]]ले त्रिभुवनका चार वर्षीय माहिला नाति [[ज्ञानेन्द्र शाह|ज्ञानेन्द्र]]लाई गद्दी आरोहण गराए । त्यस घटनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा [[मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा|मोहन शमशेर]]को आलोचना भयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसले गठन गरेको राजनीतिक दस्ता [[नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेना|मुक्ति सेनालेसेना]]ले सुरुमा विराटनगर लगायत पूर्वी पहाडी क्षेत्र कब्जामा लियो । वीरगञ्जमा थिरबम मल्ल र पुरन सिंहले क्रान्तिको नेतृत्त्व गरेका थिए । सशस्त्र आन्दोलनका क्रम मा [[थिरबम मल्ल]]ले वीरगति प्राप्त गरे । पश्चिमी क्षेत्रमा डा. [[कुँवर इन्द्रजित सिंह|कुँवर इन्द्रजित]] (के.आई.) सिंहले नेतृत्त्व गरेका थिए । उनको नेतृत्त्वमा भैरहवामा [[मुक्ति सेना]]ले ठुलो सफलता हात पारेको थियो । पूर्वी नेपालको मोर्चा सम्हालेका बी.पी. कोइराला र सुवर्ण शमशेरले बिनायुद्ध पनि धेरै ठाउँहरू कब्जा गरे । पूर्वी क्षेत्रदेखि पश्चिम क्षेत्रसम्म धेरै स्थानहरू मुक्ति सेनाले कब्जामा लियो र ती ठाउँहरूमा जन सरकार गठन गरियो । राणाहरूलाई कर नतिर्न आह्वान गरियो । यसले राणाहरूको उपस्थिति काठमाडौंमा मात्र सीमित रहन पुग्यो । स्थिति भयावह र प्रतिकूल भएपछि मोहन शमशेरले भारतलाई मध्यस्थता गर्न अनुरोध गरे ।
वार्ताका लागि आफ्ना छोरा [[विजय शमशेर]]लाई दिल्ली पठाए । तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री [[जवाहरलाल नेहरु|जवाहरलाल नेहरू]]को मध्यस्थतामा राणा, नेपाली काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनबिच १२ फेबु्रअरी १९५१ (१ फागुन २००७) मा त्रिपक्षीय [[दिल्ली सम्झौता]] भयो । तत्पश्चात् राजा त्रिभुवन फागुन ४ मा नेपाल फर्के र फागुन ७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरे । यसरी १०४ बर्से राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र प्राप्त भयो ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/964734" बाट अनुप्रेषित